Etajakhabar » News Portal
काठमाडौं । खासमा सुष्मा कार्की नयिका भन्दा पनि बढी आइटम गर्लका रुपमा बढी चर्चित छन् । उनले बेला बेलामा सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्ने तस्विर, अन्तरवार्तामा प्रस्तुत हुने शैली र आइटम अवतारका कारण नै उनी सदाबहार रुपमा मिडियामा छाइरहे पात्र हुन् । चलचित्र लुटको उध्रेको चोलीबाट एकाएक हिट भएकी सुन्दरी नायिक...
एजेन्सी । विबादास्पद बलिउड फिल्म ‘पद्मावती’को विषयलाई लिएर राजपुत करणी सेनाले निर्देशक संजय लिला भंसालीको टाउको काट्ने र अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको नाक काट्नेसम्मको धम्की आइरहेका बेला बलिउड सुन्दरी नायिका तथा पूर्व पोर्न स्टार सन्नी लियोनीलाई पनि ज्यानै लिने धम्की आएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा बलि...
शुभ यात्राको लागि वार अनुसार अपनाउनुहोस्, यस्ता उपाय
-आइतवार यात्रा प्रारम्भ गर्ने क्रममा चीनी अथवा यसमा बनेको परिकार या घीउ अथवा यसमा बनेको परिकार सेवन गरेर यात्रा गर्नुहोस्, जसले सफलता मिल्छ । यदि घीउ र चीनीको संयुक्त व्यंजन सेवन गरेमा सफलता मिल्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । -सोमवार दूध वा यसबाट बनेको पदार्थ अथवा खिर खाएर, निधारमा टिका लगाएर यात्रा गर्न...
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छोरा प्रकाश दाहाललाई दागबत्ती दिएका छन् । पशुपति आर्यघाटमा प्रचण्डले दागबत्ती दिँदा आँफुलाई संहाल्न सकेनन् । दागबत्ती दिहिरहँदा प्रचण्ड निकै बेर रोए । प्रकाशका जेठी श्रीमती सिजृनातर्फका छोरा प्रसिद्ध ८ वर्षका छन् । र कान्छी श्रीमती विनातर...
ताजा खबर काठमाण्डौ। नेपाली चलचित्र ‘भैरे’ घोषणा भएको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै दयाहाङ्ग राई, सुनिल थापा, विक्रान्त बस्नेत, सुरक्षा पन्त, बर्षा सिवाकोटी स्टारर यस चलचित्रको पुजाआजा गरिएको छ । ‘भैरे’लाई एभरेष्ट सुर्य बोहराले निर्देशन गर्दैछन् । बोहराले यसअघि अग्...
काठमाडौँ । अभिनेत्री इशा गुप्ताले हालै हट फोटो सेसन गराएकी छिन् । पछिल्ला दिनमा कन्डमको विज्ञापनमा अभिनय गर्न सनी लियोनको भन्दा डबल पारिश्रमिक माग गरेर चर्चामा रहेकी इशाले एउटा फेसन म्यागजिनका लागि फोटो सेसन गराएकी हुन् । अधिकांश सट बिकिनीमा दिएकी इशाका ती फोटाले अहिले बलिउडमा चर्चा पाएको छ । उनले क...
काठमाडौं । पछिल्लो समयका चर्चित नायक अनमोल केसीसँग चलचित्र ‘कृ’ मार्फत डेब्यू गर्न लागेकी नायिका अदीति बुढाथोकीको भारतीय मिडियामा चर्चा चुलीएको छ । नेपालमा अनमोल केसीसँग चलचित्र ‘कृ’ मा अनस्क्रिन रोमान्स गरिरहेकी सुन्दरी नायिकाले कृको छायांकन सुरु गरेसँगै बोल्डभन्दा बोल्ड अवतारमा आँफुलाई उर्तान थाले...
लोकतान्त्रिक शक्तिले जितेमा १० वर्षभित्र नेपाललाई एशियाको समृद्ध मुलुक बनाइने
बर्दिया – भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले बर्दियामा पुलपुलेसा, कृषिको आधुनिकीकरण, किसानको समृद्धि, सुविधासम्पन्न विद्यालय तथा स्वास्थ्योपचार केन्द्रको सञ्चालन गरी बर्दियाली जनताको जीवनलाई सुखी र सम्पन्न बनाइने बताउनुभएको छ । प्रेस क्लब अफ नेपालले राजापुर नगरपालिका–२ जोतपुरमा आयोजना ...
आँफै बन्द भयो नेपाल ! , काठमाडौँ उपत्यकामा सामान्य प्रभाव, देशभरकै बिद्यालय प्रभावित
काठमाडौं । नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले शुक्रबार नेपाल बन्द आह्वान नगरेको जनाएपनि बन्दको प्रभाव काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका स्थानमा परेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले सामान्य रुपमा गाडी चलिरहेको ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ । उपत्यका भित्रने र बाहिरिने गाडी भने हिजोअस्तिको भन्दा कम चलेको मुख्य नाका नागढुंगाले जनाएको छ । त्यहाँबाट बिहान...
छोरा प्रकाशको हृदयाघातका कारण निधनपछि चुनावी अभियान स्थगन गरेका प्रचण्ड आजदेखि चुनावी अभियानमा
आज नेपाल बन्द छैन, भ्रममा नपर्नुहोस् हाम्रो पार्टीले नेपाल बन्दको कुनै कार्यक्रम गरेको छैन : विप्लव
वाम सरकार बन्ने बित्तिकै बेरोजगार नेपालीले रोजगारी पाउने
बैतडी- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रामबहादुर थापाले वामपन्थी सरकार बनेपछि दे...
काठमाडौँ । धर्मोदय सभाले भारतमा निर्वासन जीवन बिताइरहेका धर्मगुरु दलाई लामालाई ...
रोल्पा : प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले चुनाव सरेको सपना नदेख्न नेकपा (एमाले)का...
रसुवा : यही मंसिर १० गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्...
नवलपरासी । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शंशाक कोइरालाले नेपालमा समृद्धि र वि...
काठमाडौँ : पहिलो चरणमा मंसिर १० गते ३२ जिल्लामा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा ...
मेषः– स्थिर पूँजीलाई नचलाई काम गर्नु होला । काम गरेर प्रतिष्ठा कमाउन सकिनेछ । कार्य सम्पादन सहज र सरलता तरिकाले हुनेछन् । राजनीति तथा नोकरीमा नयाँ अवसर आउन सक्छ ।
वृषः– मनमा भय त्रास उत्पन्न हुन सक्छ । इज्जत प्रतिष्ठाको ख्याल राखेर काम गर्नु होला । फलदायी यात्राको सम्भावना देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दि कायम रहने देखिन्छ ।
मिथुनः– परिस्थितिले साथ दिने देखिन्न । अहार विहारका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । गर्न खोजेका काम पनि बन्ने छैनन । आफन्तबाट नै विश्वास घात हुन सक्छ । खर्चमा तिव्रता आउन सक्छ ।
कर्कटः– नयाँ कार्य दिशा स्पष्ट हुनेछ । दैनिक काम काजमा प्रगति हुनेछ । हिसाव किताव गरेर काम गर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्ने छ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ ।
सिंहः– विरोधीको बक्रदृष्ठि पर्नेछ काम गर्दा विचार पु¥याउनु होला, शत्रु माथि विजय होला । काम गर्दा त्रुटी हुन सक्छ सोच विचार गर्नु होला । व्यापार व्यवसयामा सुधार आउनेछ ।
कन्याः– मनमा दुविधा उत्पन्न हुनेछ । समयमा निर्णय लिन नसक्दा अवसर गुम्ने सम्भावना रहने छ । यात्रामा कठिनाई हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट उचित लाभ लिन सकिने छैन ।
तुलाः– गलत विचार बढ्न सक्छ । मानसिक एवं शारीरिक दूर्वलता बढ्नेछ । घरयासी समस्या बढ्ने छन् । धन माल हराउन वा चोरी हुनसक्छ सतर्क रहनु होला । विवाद पर्न सक्छ ।
वृश्चिकः– भाग्यले साथ दिदा धेरै क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । सहास,धैर्यता र पराक्रम बढ्नेछ । नयाँ कामको अवसर आउनेछ । काम अनुुसारको दाम हात पर्नेछ । बन्द व्यापारमा प्रगति हुनेछ ।
धनुः– कसैलाई पनि वोलि नफुत्काउनु होला आफैलाई अप्ठ्यारो हुनेछ । आर्थिक कारोवारमा चनाखो रहनु होला । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् । व्यापार मन्द रहनेछ ।
मकरः– समयले साथ दिनेछ । उच्चमनोबलका साथ काम गर्नु होला, गरेका काम सफल हुनेछन् । अनावस्यक खर्चमा नियन्त्रण आउनेछ । उत्तम भोजन र आसन प्राप्तिको योग देखिन्छ ।
कुम्भः– शत्रुबाट पीडित हुने अवस्था आउन सक्छ । दिन प्रतिकुल देखिन्छ दैनिक काममा असर पर्नेछ । व्यापारबाट आफुले सोचे जस्तो लाभ लिन सकिने छैन । खर्चमा वृद्धि हुनेछ ।
मिनः– आकस्मिक आम्दनी बढ्ने योग छ । व्यापार व्यवसयाबाट पनि आम्दानी बढ्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा सफलता मिल्नेछ । पार्टनरशिप व्यवसायमा हात नहाल्नु होला
तपाईको आजको राशिफल : २०७४ साल मंसिर ८ गते शुक्रबार
लहान, ८-श्रीमतीको घाँटी रेटेर हत्या गरी फरार रहेका श्रीमान्लाई गएराति सिरहा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घरायसी विवादपछि ३० वर्षीया समिला खातुनको गत मंगलबार घाँटी रेटेर फरार रहेका कल्याणपुर नगरपालिका– ६ भोक्राहाका हत्यारा श्रीमान् ३५ वर्षीय ओली राइनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया र इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर धनुषाबाट खटिएको विशेष...
काठमाडौँ – सरकारले खरिद गर्ने काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण कार्...
काठमाडौँ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक उडानमा चाप परेको छ। देशको एक मात्रै त्रिभुवन अन...
रसुवा, ८ मंसिर । मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच झडप हु...
सल्लेरी, सोलुखुम्बु- सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका– ५ कि आङछोटी शेर्पा विगत १५ वर्षदेखि काठमाडाँ...
काठमाडौँ – सरकारले खरिद गर्ने काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण कार्य भारतीय कम्पनीकै विस्तृत परिय...
काठमाडौँ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक उडानमा चाप परेको छ। देशको एक मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुन...
मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा हुन गइरहेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा ‘स्पोन्सर’को नाममा मुलुक...
एजेन्सी । अमेरिकामा निर्माण भएको एउटा काठे घर यतिबेला चर्चामा छ । यो घर संसारकै ठुलो एउटा काठे घर भएका कारण पनि चर्चामा छ । जसलाई ट्री हाऊसका रपमा पनि चिनिन्छ । झन्डै ९८ फुट अग्लो यो घर निर्माण गर्न १५ वर्ष लागेको जानकार...
काठमाडौँ । समाचारको शीर्षक पढ्दैमा तपाइँ छक्क पर्नुभयो होला । अहिलेको दुनियामा यस्ता देशपनि छन् जहाँ महिलाले ब्रा तथा पेन्टी समेत लगाउन पाउँदैनन् भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रै पर्छ । तर विश्वमा यस्ता देशको कमी छैन जहाँ अझैपन...
अचम्मको स्मरणशक्ति भएको भेडा जसले सजिल्यै चिन्दछ सेलिब्रेटीहरुलाई
भेडालाई एकोहोरो तथा बुद्धि नभएको प्राणीको रुपमा होच्याइन्छ । तर, हालै गरिएको एक अध्ययनले चाहीँ भेडा निकै होसियार प्राणीको रुपमा रहेको र तस्वीर हेरेरै विश्वका प्रसिद्ध हस्तीहरुको पहिचान गर्नसक्ने देखाएको छ । बेलायतको क्या...
अचम्म ! औँलाको छापजस्तै ओठको छाप पनि कसैको कसैसँग मिल्दैन
मानव शरीरका अंगमध्ये ओठ सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छ । सौन्दर्यमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने ओठ व्यक्तिअनुसार विभिन्न आकारका हुन्छन् । तर, ओठबारे कैयौँ तथ्य छन्, जुन तपाईं अधिकांशलाई थाहा नहुन सक्छ : स्वामी ज्ञानमित्र -ओठमा कह...
ताजा खबर:- अधिकांश मानिसले कयौँ पटक पर्समा अनावश्यक चीजहरू राख्ने गर्दछन्। हाम्रो अल्छीपनका कारण यस्ता चीजलाई हटाउन प्रति हामी त्यति धेरै इच्छुक हुँदैनौ । तर के तपाईलाई थाहा छ, यो आलस्य र गल्ती नै समस्याको कारण बन्छ । कत...
काठमाडौं । कम उमेरका बालिकामाथि यौन उत्पिडन गरेको आरोपमा अमेरिकामा नेपाली तेक्वान्दो प्रशिक्षक पक्राउ परेका छन् । वासिंटन राज्यको बियाभरटन स्थित ८९०७ वेस्ट क्यानन रोडमा तेक्वान्दो स्कूल सञ्चालन गर्दै आएका शुद्धोधन रञ्जित बाल यौन दुराचारको अभियोगमा पक्राउ परेका हुन् । ५१ वर्षे रञ्जितले सन् २०१२ देखि २०१५ भित्र १४ वर्षभन्दा कम उमेरका तीन बालिकालाई यौन...
रुकुम – रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबको रियादमा रहेका एक रुकुमेलीको मृत्यु भएको छ । ...
काठमाण्डौं । ‘विपद्को घडीमा सबै नेपाली जुटौं अनिवार्य, मानवता र सद्भावको लागि गरौं स...
राजविराज : वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सप्तरीबाट मलेसिया गएका एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । जिल...
काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीका लागि दलालमार्फत अवैधानिक रूपले युएई हुँदै कुवेत पुर्याइ...
नेपाल आइडल बुद्ध लामाले अझै गाडी पाएका छैनन् ? संचालिका रिमाले खोलिन् मुख (भिडियो)
Taja Chit-Chat With Maha Nayak Rajesh Hamal
Taja Chit-Chat With Singer Pramod Kharel
Taja Chit-Chat With Singer Yam Baral
Taja Chit-Chat With Singer Sashi Rawal
Taja Chit-Chat With Singer And Video Director Sashan Kandel
Taja Chit-Chat With Singer Milan Amatya
Taja Chit-Chat with Singer Juna Prasai
Taja Chit-Chat With Singer/Model Smriti Pokharel
Taja Chit-Chat With Bhuniya, Harisha Baniya Of Meri Bassai
आठराई, (तेह्रथुम), १९ भदौ । तेह्रथुममा रहेको दक्षिण एसियाकै अग्लो ह्यात्रुङ झरना अहिले आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्यस्थल बनेको छ । वर्षात्को समयमा झरनामा प...
रामपुर (पाल्पा), १८ साउन । प्रकृतिले नै उपहारस्वरुप दिएको रामपुरको ‘शान्तिदीप पार्क’ अहिले पर्यटकको गन्तव्यस्थल बन्दै गएको छ । पार्कलाई पर्यटकीय क्षेत...
पोखरा, ७ असार । गर्मी बढेसँगै केही दिनयता भारतका विभिन्न स्थानबाट पर्यटकीय नगरी पोखरा आउने भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । भारतको विभिन्न ठ...
काठमाडौँ, ६ असार । साहसिक पर्यटनप्रति विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्दो छ । नेपालमा पदयात्रा, पर्वतारोहणपछि बढी सम्भावना बोकेको ¥याफ्टिङ अर्थात् जलयात्रा प...
सिलगुडी (भारत), २८ जेठ । भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा क्रियाशील पर्यटन व्यवसायीले नेपालको पर्यटकीय नगरी पोखरामा भारतीय पर्यटकको आगमन बढाउन सीमा क्षेत्...
रत्ननगर (चितवन), १४ जेठ । चितवनको सौराहासँग ग्रामीण क्षेत्रलाई जोडेर पर्यटन विस्तार गर्नुपर्ने यहाँका नवनिर्वाचित प्रमुख उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरुले ब...
धादिङ ज्वालामुखी गाउँपालिका-५ का कक्षा आठमा अध्यनरत १६ वर्षीय ऋतिक मगरलाई उनको भाइबरमा भार...
काठमाडौं। सोसल नेटवर्क साइट सगुन डटकमको चर्चा अस्ति भन्दा हिजो र हिजो भन्दा आज बढ्दो छ । फ...
काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का अध्यक्ष नैनसिंह महर गत महिना अमेरिका गए । त्यह...
काठमाडौं -कतिपय खराब कुरालाई पनि हामीले जीवनको अंग बनाएका हुन्छौँ । जुन बानीले शरीरमा गम्भीर रोग नै निम्त्याउन सक्छ । शर...
काठमाडौँ -केहि दिनयता अस्पतालमा मुटु जाँच गराउने संख्या बढ्दो छ । हृदयाघातका कारण आकस्मिक मृत्यु हुने घटना बढ्न थालेपछि ...
र्याम्पको अगाडी उत्रिने मोडलले किन छोप्छिन् हातले छाती ? यस्तो छ वास्तविकता
नेपालीभाषी फेशन डिजाइनर प्रवलले डिजाइन गरेको ड्रेसमा जब न्यूयोर्कमा मोडलहरु यसरी ठाँटीए
बडीगार्डले सम्रागीलाई जुरुक्कै कांधमा हालेपछी भयो फ्यानहरुको तछाडमछाड
चलचित्रमा समेत बोल्ड अवतारमा देखिएकी यि नायिकाले गरिन् निकै कामुक फोटोसुट, के अब फिल्म पाउलिन् त यिनले ?
लहान, ८-श्रीमतीको घाँटी रेटेर हत्या गरी फरार रहेका श्रीमान्लाई गएराति सिरहा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घरायसी विवादपछि ३० वर्षीया समिला खातुनको गत मंगलबार घाँटी ...
तुलसीपुर, दाङ- दाङको देउखुरीको राप्ती खोलामा टिपर सफा गर्ने क्रममा बिहीबार बेलुकी करेन्ट लागेर टिपरका चालक र स...
भरतपुरमा भाटभटेनी सुपरमार्केट खुलेपछि क्षेत्रपुरकी रेखा गुरुङलाई भ्याननभ्याई छ । उज्यालो भएदेखि साँझसम्मै उनी ...
उपचारको नाममा महिलालाई यौनशोषण गरी फोटो र भिडियो खिचेर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कथित धर्मगुरु पक्राउ परेका छन् । चाल...
ताइपेई : उत्तरी ताइवानको ताइपेई शहरमा रहेको एक अपार्टमेन्टमा बुधबार भएको आगलागीमा परी कम्तीमा पनि नौजनाको ज्यान गएको समाचार छ । यस आगलागीमा परी नौजना व्यक्तिको ...
बङ्गलादेश : बङ्गलादेश र म्यानमारबीच रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई दुई महिनामा फिर्ता गर्ने सहमति भएको ढाकाले बिहीबार ...
सुडान : उत्तर दक्षिण सुडानी लीर भन्ने ठाँउमा भएको भीडन्तमा परी कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु भएको छ । सरकारी सेना र ...
अफगानिस्तान – अफगानिस्तानमा नागरिक समाजका अगुवाका छोरीहरूले आँफूहरू सडकमा हिँडिरहेको अवस्थामा मोटरसाइकलम...
काठमाडौँबाट तीन जना साहित्यकारलाई अचानक गिरफ्तार गरिएपछि…
काठमाडौँ : प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस) का उपाध्यक्ष खेम थपलियासहित तीन जनालाई प्रहरीले शुक्रबार गिरफ्तार गरेको छ । प्रलेसको मासिक परिसंवाद कार्यक्रमबाट फर्कने क...
मेरिल्याण्ड, १३ कात्तिक- नेपाली मूलका अमेरिकी, पत्रकार तथा साहित्यकार, सामाजिक अभियन्ताले नेपाली भाषाको अन्तर्...
काठमाडौं । कवि गोविन्दराज विनोदीद्धारा रचित महाकाव्य ‘कैकेयी’ राजधानीमा लोकार्पण गरिएको छ । साहित्यकार एवं प्...
काठमाडौँ । ‘गङ्गेश्वरी प्रतिष्ठान’द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान गर्ने गरी स्थापना गरिएको ‘गङ्गेश्वरी जागरण पुरस्कार,...